Kedu ụdị ngwá ahịa ị nwere ike ịkwado maka nchọpụta isiokwu Amazon?
Tupu igosi gị ụdị ọrụ ịmepụta ihe dị iche iche nke Amazon ma jiri ya mee ihe, ka anyị jiri mmalite nke ihe ọmụma malite. O di nwute, Amazon adighi ekwuputa otu ukpuru ma obu ihe kwesiri ntukwasi obi nke A9 ranking algorithm kwuru - di ka isi ihe di iche iche nchọta dika Google, Yahoo, Bing, wdg.Ma, nke a bụ ihe anyị nwere ike ịma. Dị ka nyocha ndị a na-eme n'oge na-adịbeghị anya:
A na-ahụkarị nhazi nke ihe nchọpụta nke Amazon maka egwu (ọ dịkarịa ala maka oge). Ọ pụtara na ị ga-eme ike gị kacha mma iji zere nkwarụ dị iche iche, ma ọ bụ iji obere ala ma ọ bụ iji ya mee ihe mgbe o kwere omume, karịsịa mgbe ọ na-abịa na isiokwu ndị dị na azụ - muebles para terrazas exteriores.
Tụlee ihe mgbochi 250 ga-egbochi ka ị gụọ ọnụ ọgụgụ mkpado gị. O doro anya na ndị ọrụ Amazon ọ bụla enweghị nkwenye. Ka o sina dị, ọ ga-aka mma ka ị nọrọ n'akụkụ nchebe ma buru ọnọdụ a n'uche.
Idebe nke ahụ n'obi, oge eruola igosi gị ụfọdụ nhọrọ m anwale maka Amazon Keywords research. Nke a bụ nkọwa nkowa nke onye ọ bụla a ga-eji mee nchọpụta mgbe ọ na-achọpụta nchịkọta ihe omimi miri emi karị. Na-eche na ọ dịkarịa ala iji nwalee ndị a. Ma, n'ezie, ọ bụ naanị gị ka ị ga-esi kpebie nke ị ga-ewe maka nhazi njirimara ngwaahịa gị.
1. Okwu Anya - ọ bụ ngwá ọrụ dị mma inyere gị aka na nyocha Amazon. Okwu Eye na-ekwu okwu na nchekwa data ya nke nwere ihe karịrị otu nde isiokwu dị iche iche dị iche iche na-akwado ya na mkpụrụedemede nchọta ọtụtụ iji chọpụta nke ọma na nke n'ime ha nwere ike ịme mmeri ọchụchọ, ma ọ ga-abụ na ọ ga-adị mma ịkwụsị site na ndepụta gị nke isiokwu dị iche iche na njikọta ogologo oge.
2. Kparser - ikpo okwu n'Ịntanet nwere ike ịchọta ngwa ngwa gị nke isiokwu ga-emeri na ịchọta ịzụ ahịa. A na-agbakọta data ahụ dabere na ọnụ ọgụgụ nyocha ọchụchọ na ngwaahịa azụmahịa kachasị ọhụrụ ọ bụghị naanị na Amazon na eBay, kama site na ọchụchọ mbụ site n'aka Google na Bing. Nanị ihe ọjọọ banyere Kparser bụ na ọ dị mwute na a na-enye usoro ntanetị a n'Ịntanet site na ụgwọ akwụ ụgwọ iji guzosie ike.
3. Kiwi bụ ihe ọzọ dị mkpa maka nchọpụta sayensị Amazon, bụ nke ga-abara uru maka inweta nghọta miri emi nke ndị ahịa gị. Jiri ya sara mbara nchekwa data guzobere na oke data na gị lekwasịrị anya na-ege ntị, ya isi mmasị, na izu ahia ịzụ mmetụta - zukọtara kpọmkwem si Amazon onwe ya, yana Google ahịa na ọnọdụ, na YouTube profaịlụ.
4. Asin Key - bụ isiokwu nyocha ikpeazụ nke isiokwu ikpeazụ ga-amasị m igosi gị maka taa. N'etiti akụkụ ya kachasị elu, ngwá ọrụ a na-arụ ọrụ n'ịntanetị nwere ụdị dịgasị iche iche nke tarifu a na-ahaziri maka otu ụdị ngwaọrụ dị iche iche. Nyochaa ohere nyocha ọchụchọ na ndị na-esonụ na-wuru frameworks: Amazon Product Ndepụta SEO ngwá ọrụ, elu Keyword Tracker, na ya ike isiokwu aro uwe. Ma, rịba ama, na Asin Key Amazon nyocha ihe nyocha ga-enyere gị aka naanị ma ọ bụrụ na i nweworị ihe ọbụla na nghọta nke SEO na isi ụkpụrụ nke ecommerce search ranking algorithm.